LG waxay cusbooneysiineysaa kormeerayaasheeda Mac, iyadoo si buuxda loo waafajin karo onkodka 3 | Waxaan ka socdaa mac
LG wuxuu cusbooneysiiyaa kormeerayaasheeda Mac, oo leh is waafajin buuxda ee onkodka 3
Sannadkii hore waxaan haysannay noocii ugu horreeyay ee shaashadaha LG oo loogu talagalay inta badan inay noqdaan kormeeraha labaad ee laptop-yada, maadaama ay markii ugu horreysay xiriir USB-C leeyihiin. Apple iyo LG waxay asal ahaan iska kaashadeen inay abuuraan 4K iyo 5K UltraFine oo loogu talagalay moodooyinka ugu dambeeyay ee MacBook Pro 2016. Kormeerayaashan ugu horreeyay waxaa lasii daayay isla waqtigaas oo dib loo habeeyay MacBook Pros 2016. Waxaa laga yaabaa in waqti yar la joogo, LG wuxuu sii daayaa nooca labaad ee kormeerayaashan, markan oo leh a isdhexgal buuxa oo lala yeesho Thunderbold 3. Warku wuxuu imanayaa kahor CES 2018, carwadii ugu horreysay ee tikniyoolajiyadeed ee sanadka oo lagu qabto toddobaadyo yar gudahood.
LG waxay qorsheyneysaa inay ku soo bandhigto seddex kormeerayaal dhacdadan. Nooca ugu horeeya ee LG soo bandhigi doono wuxuu noqon doonaa 32 inji iyo 4k UHD. Waxay bixisaa caan ah farsamada nano IPS waxaa qoray LG. Sida laga soo xigtay shirkadda, labadaba xoojinta iyo nadiifnimada sawirradu waxay ku fiicnaanayaan kormeerahan cusub. Laakiin warka intaas kuma eka. Waxay la jaan qaadi doontaa HDR 600, kuu oggolaanaya inaad daawato filimada dhammaan xoogga Hollywood realizations.
Laakiin markay tahay Macs, ka qaylo 3 waafaqid Waa dhameystiran yahay Isdhexgalka kormeerahan waxaa loo fuliyaa labadaba kormeerayaasha waaweyn iyo kuwa sare, markan tayada 4k. Cusboonaysiin kale ayaa ah gudbinta dhammaystiran ee codka iyada oo loo marayo fiilada USB-C ee isku xirta Mac-ga iyo shaashadda LG.
Qaabka labaad ee LG ay soo bandhigi doonto ayaa soo bandhigi doona 34 inji iyo 5k xal. Waxaan ku kasbaday xaglaha daawashada ee laxiriirta nuqulkii hore, xallinta 5120 x 2160 pixels iyo heerka u dhigma ee 21: 9 Kormeerahan waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha qabta howlo badan, sida tifaftireyaasha fiidiyowga, sawir qaadayaasha iyo softiweerrada iyo barnaamijyada horumarinta. Dabcan, waxaan haynaa tiknoolajiyadda Nano IPS, HDR 600 iyo dekedda Thunderbolt 3 oo u gudbin kara sawirrada xallinta 5K ee 60Hz
Kormeeraha saddexaad ee ay shirkaddu qorsheyneyso inay sii deyso wuxuu la mid noqon doonaa nooca 34-inji ah, laakiin wuu soo bandhigi doonaa farsamada xawaaraha sare ee G-Sync gaar u ah cayaartoyda.
Waxaan rajeyneynaa inaan ogaanno faahfaahin dheeri ah, oo ay kujirto qiimaha, daabacaadda soo socota ee CES ee la qaban doono laga bilaabo Janaayo 8, 2018.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » LG wuxuu cusbooneysiiyaa kormeerayaasheeda Mac, oo leh is waafajin buuxda ee onkodka 3
Apple waxay kireysaa seddex maamule oo dheeraad ah Amazon Studios
Sida looga tirtiro xogta Touch Bar